Bazar de Noel sy fifamoivoizana – Malag@sy Miray
Fety ny andro, na ny marina kokoa, manakaiky andro fety isika izao. Tsy misaraka amin’izany ny fandaniana fahatany fanao rehefa vanim-potoana toy izao (ho an’ny sasany), raha fandaniana tsy azo ialàna kosa ho an’ny hafa.
Rehefa miresaka fandaniana ihany isika dia tsy afa-mivaona amin’ny resaka tsena. Tsy ny tsena rehetra koa anefa no hahaliana fa tsena iray miavaka sy mandalo fotsiny ihany. Dia ny Bazar de Noel
Araka izany anarany izany dia natao manokana ho an’ny andro Noely izy io (na dia miitatra toy ny sima misioka ka lasa lavitra any ambadiky ny taona vaovao aza). Ho fiatrehana izany dia nametraka fepetra ny Kaominina (C.U.A) ka nilaza fa ny eny Mahamasina ihany no azo anaovana ity karazan-tsemìnba iray ity. Andoavana haba ny fisoratana anarana hahazo toerana amin’izany.
Zovy anefa no tsy mahalàla, ary iza no tsy mahita fa ny moron-dàlana rehetra eto Antananarivo Renivohitra mihitsy izao no BAZAR (DE NOEL) ISAN’ANDRO. Ny aza mba tavela sy tafahitsoka any anatin’ireny ampahan-dàlana ireny ihany ny fiara, tompoko, fa dia ao ianao no raisina mandritra ny minitra maro dia maro (mba tsy hitenenako hoe ora miray na roa).
Fa ity no loza, raha efa nandoa vola izao ireo nisoratra anarana hanao bazar de noel eny Mahamasina, moa tsy faiantoka iray lavaka fotsiny ve? Ny hafa anefa aty ivelan’ny faritra manao tsy misy teritery, mivarotra an-kahalalahana, ary mahita ‘kil’ betsaka noho ny azy, satria tsy misy fepetra noraisin’ny Kaominina mba ho fampanajàna ny teny nataony, tsy misy fepetra noraisin’ny Kaominina mba ho fiarovana koa an’ireo nasainy niditra eny Mahamasina, ary tsy misy fepetra sahin’ny kaominina raisina manoloana ireo mpivarotra, tsy vitan’ny manery ny arabe, fa sady mandoto tanàna, sns. Tsy sahy andraisana andraikitra va re fandrao ….. Asa lahy!
Nihaino radio tsy miankina iray aho ary fandaharana sy fanadihadiana iray efa nalefa hatry ny omaly (22/12/2011) no reko, mikasika ny fitohanana’ny fiara eto Antananarivo Renivohitra. Toa tsotsotra ery ny fanalàna tsiny nataon’ilay mpilaza vaovao tamin’izany. Sahala amin’ny tsy manan-tsiny ery ny Kaominina sy ny polisy monisipaly. Dia gaga aho, tena gaga. Vao nanaomboka ny vay, nodia tsy hita. ka nony mivoaka nàna vao hoe « Fa inona ity? » Asa anefa na fantatry ny mpandraikitra ny tanàna tokoa na tsia (fa izaho aloha mahafantatra), fa ankoatra ny hadalan’ny taxibe (izay mbola tsy sahy andraisana andraikitra mazava ihany koa), dia isan’nby tena antony mahatonga fitohanana eran’Antananarivo io fidinana anaty arabe manao asa fivarotana etsy Behoririka, sy Andravoahangy ary ny faritra manodidina io. Kodiarandroa no fitondran’ny tena ka tsy sarotra ny mahita sy manamarina an’izay. Sarotra ho an’ny fiara mantsy ny handeha hitety fitohanana ka hijery ny maha-mitombina io lazaiko io. Aiza va ka raha miala eto Andravoahangy ianao ho any Alasora, dia aleo faritako eto ny zotra narahako, ary nahitako filaharanà fiara tsy nitapaka mandrapahatonga tany Ambatoroka (mandroso): Andravoahangy, Behoririka, Tsiazotafo, Ampandrana, Ankorahotra, Ambanidia, Ambatoroka….Fa rehefa niverina avy any indray dia toy izao no endriky ny fitohanana: Ankadindratombo, Ambatoroka, Ambanidia, Ankorahotra, Ampandrana, Andravoahangy ambony, Ambondrona, Ambohijatovo, Analakely, Soarano, Behoririka, Andravoahangy ambany (ninia nanalavi-dàlana mba hijery ny zava-misy)
Aoka aloha izay fa lava loatra sady mbola handeha hijery sao mitohana be ao ivelany ao. Mbola hamonjy #Antambl (Antananarivo miblaogy) any amin’ny Chillout Cafè mantsy.
BAZAR DE NOEL, milay fa tohizo eeee! Isan’andro no fetin’ny mpivarotra
Par Avylavitra Aucun commentaire